Dhacdo Qosol leh: Kumanaan haween ah oo loo qaybiyey Firimbi (Maxayse tahay sababtu)
Jun 7, 2012 - 1 Jawaab	Number of View: 1755Share
Comodoro Sooyaal News Network
Magaalada Comodoro ee xarunta gobolka Chubut ee ku yaal Koonfurta wadanka Argentine ayaa maamula deegaankaasi wuxuu qaaday talaabo aan horey loo arag taasi oo ku aadan 10 kun oo haween ah oo ku dhaqan magaaladaasi oo loo qaybiyey firimbi.
Talaabadan ayaa lagu macneeyey inay tahay sidii looga hortagi lahaa gaboolfalada dhanka kufsiga ama xoog wax uga doonka haweenka oo magaaladaasi ka noqdey tusbax afka laga furay, iyadoo firimbigan loo qaybiyey haweenka oo ah mid sanqar ama cod gooni ah leh sameynaya loogu tala galay in haweentu dhawaajiso hadii ay la kulanto fal kufsi ah, taasi oo laamaha Amaanka durbaba loo yeerayo.
Maamula dawlada hoose ee magaaladaasi oo gacan ka helaya hay’adaha aan dawliga aheyn ee deegankaasi ayaa qaaday talaabo lagu ururinayo lacago lagu sameeyo firimbiyadan, iyadoo tani lagu dhaqaaqay ka dib markii bishii hore oo kaliya magaaladaasi laga soo wariyey sadex xaaladood oo kufsi ah oo lagula kacay haween da’a yar.
Ana Llanos oo ah xoghayaha horumarinta bulshada ee magaalada Comodoro oo ah magaalo hodon ku ah soo saarista Saliida ayna ku dhaqan 200 kun oo qof ayaa sheegtey in talaabadan aanay ka helin wax taakulo ah dawlada dhexe, waxayna sheegtey inay rajeynaynayso inay ka hortagto falalka kufsiga iyo tacadiyada kale ee haweenka lagula kaco.
“Uma aynan ogolaan haweenka iyo wiilasha inay u adeegsadaan badbaadooda hub, laakiin inay adeegsadaan firimbi hadii ay dhacdo in la soo weeraro waxay ila tahay inay u muuqato halka ugu fiican” ayey tiri Ana.
Firimbigan ayaa loogu tala galay in haweenaydu inta bushimaha galiso ay ka qaylisiiso iyadoo ujeedadu tahay inay ku bixiso qaylo dhaan caawimaad doon ah hadii ay dhacdo in ay la kulanto fal ku saleysan kufsi ama xoog sheegasho galmo.
Wargeyska Clarin ee ku soo baxa luuqada Spanish-ka ee ka soo baxa wadanka Argentine oo sheekadan qoray ayaa sheegay in wasaarada cadaalada dalkaasi ay sheegtey in arintan aanay wax lug ah ku lehyn, sida uu sheegay wasiirka wasaaradaasi Touriñán Javier.
Ladan xasan says:	January 13, 2013 at 5:50 am	Koley ani waxay ilatahay mid hawenka garab aad uweyn kusinayo badbadintooda